ကိုဗစ်ကာလမှာ အလုပ်ခွင်ပြန်ဝင်ရမယ့်သူတွေ ဂရုစိုက်နိုင်စေဖို့ - Hello Sayarwon
ကိုဗစ်ကာလမှာ အလုပ်ခွင်ပြန်ဝင်ရမယ့်သူတွေ ဂရုစိုက်နိုင်စေဖို့
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 19/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ COVID_19 ဟာ ကူးစက်မှုမြန်ဆန်စွာနဲ့ လူတစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကို ကူးစက်နေပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်သူတွေမှာ နေပြန်ကောင်းလာသူတွေရှိသလို သေဆုံးသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒီပြင်းထန်းလှတဲ့ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးက စမ်းသပ်နေဆဲဖြစ်သလို ကုသနိုင်တဲ့ဆေးရယ်လို့လည်း တိတိကျကျ ရှိမနေပါဘူး။
ဒီတော့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက “Prevention is Better than Cure” (ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုထိရောက်တယ်) ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ကာကွယ်တာပါပဲ။ ကာလရှည် ပိတ်ရက်နဲ့ Work from Home ကာလတွေပြီးလို့ မဖြစ်မနေ ရုံးပြန်တက်ရတော့မယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ရောဂါ ကူးစက်ခံရမှာ စိုးရိမ်တယ် မိသားစုကိုလည်း ကိုယ့်ကြောင့် ရောဂါမကူးစက်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်း ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်လိုက်ပါ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ အလုပ်ခွင် ပြန်ဝင်ရမယ့်သူလေးတွေ လိုက်နာဖို့လိုမယ့် အချက်တွေက ဘာတွေများလဲ……….
အလုပ်ခွင်ကို ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာကိုမှ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့မှုမပြုခင် လက်ဆေးဘေစင်ဆီကို အရင်သွားလို့ ရေနဲ့ ဆပ်ပြာသုံးပြီး စက္ကန့် ၂၀ ကြာ သေချာလေး လက်ဆေးပါ။ ပြီးမှ အလုပ်စားပွဲကို ကိုယ်တွယ်ထိတွေ့တာမျိုးလုပ်ပါ။
ကိုင်ဆောင်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပိုးသတ်ပါ
စပရေးဘူးတစ်ခုထဲကို အရက်ပြန် ဒါမှမဟုတ် အစွန်းချွတ်ဆေးကို အရည်ဖျော်လို့ထည့်ထားပြီး ကိုင်ဆောင်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပိုးသတ် သန့်စင်ပါ။
အလုပ်စားပွဲကိုလည်း ပိုးသတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ အရက်ပြန် ဂွမ်းစကို သုံးလို့ရသလို Dettol လိုမျိုး ပိုးမွှားတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ဆေးရည်နဲ့ ရေကိုရောစပ်လို့ အဝတ်စသန့်သန့်နဲ့ တိုက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ လက်ပ်တော့ နဲ့ ဖုန်းတွေကိုပါ သန့်စင်ပါ။
ဒီလိုမျိုး ပိုးသတ်သန့်စင်မှုတွေ လုပ်ပြီးတိုင်းမှာ လက်ကို ရေနဲ့ ဆပ်ပြာ အသုံးပြုပြီး သေချာ စွာ သန့်စင်ဆေးကြောပါ။
ကော်ဖီခွက်၊ ရေခွက်တွေကို သီးခြားထားပါ
အလုပ်ခွင်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ကော်ဖီခွက်ရေခွက်တွေကို အခြားသူတွေရဲ့ ကော်ဖီခွက်တွေ ရေခွက်တွေနဲ့ ရောမထားပါနဲ့။ သီးသန့်ထားပါ။ မလွယ်ကူဘူးဆိုရင် အသုံးပြုခါနီးတိုင်း ရေနဲ့ဆပ်ပြာအသုံးပြုဆေး​ကြောပြီးမှ သောက်ပါ။ ခွက်တွေကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း မျှဝေသုံးစွဲတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
အလုပ်များနေသည့်တိုင် ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ရေဓာတ် လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်ပါ။ ရေခဏခဏ ထသောက်ရမှာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ရေဘူးနဲ့ထည့်ထားပြီး သောက်ပါ။
အလုပ်ခွင်မှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယဉ်ကျေးမှုအရ နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်ခြေ များတဲ့ အပြုအမူတစ်ရပ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုအစား အခြားနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ လက်အုပ်ချီပြီး နှုတ်ဆက်တာမျိုး၊ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်တာမျိုး၊ ခေါင်းညိတ် အသိအမှတ်ပြုတာမျိုးတွေကို အစားထိုး အသုံးပြုပါ။ Good Morning ပါလို့ အော်ပြီး နှုတ်ဆက်ရင်တောင် အဆင်ပြေပါတယ်နော်။
နေ့လယ်စားစားတော့မယ်ဆိုရင် ထမင်းဘူးဆိုရင်တော့ alcohol wet tissue အသုံးပြုပြီး ထမင်းဘူးအပြင်ဘက်ကို သန့်စင်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ ထမင်းဘူးကို အိတ်နဲ့ထည့်လာတာဆိုရင်တော့ လက်ကို သေချာဆေးပြီး ထုတ်လိုက်ရုံပါ။ ဇွန်းနဲ့ထည့်စားမယ့် ပန်းကန်၊ လက်တွေကို ဆပ်ပြာနဲ့ရေအသုံးပြုလို့ သေချာစွာဆေးကြောပြီးမှာ သုံးဆောင်ပါ။
အချိုရည်သောက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ အချိုရည်ဘူးကို မသောက်ခင်မှာ alcohol wet tissueနဲ့ သုတ် ပြီးရင် တစ်ရှူးနဲ့ ခြောက်အောင် သုတ်ပြီးမှ သောက်သုံးပါ။
အစည်းအဝေးခန်းမှာတောင် ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ၃ ပေခွာပြီး နေပါ။ လူစုလူဝေးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို မသွားဘဲ ရှောင်ပါ။ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပူးပူးကပ်ကပ်မနေကြပါနဲ့။
COVID_19 ဗိုင်းရပ်စ်က မျက်နှာပြင်တွေအပေါ်မှာ ၇၂ နာရီကြာ ရှင်သန်နေနိုင်တာကြောင့် ဖုန်းတွေ၊ လက်ပ်တော့ကီးဘုတ်တွေနဲ့ အခြားသောအသုံးအဆောင်တွေကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ပြီး မျက်နှာကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တာက တော်တော်လေး အန္တရာယ်များပါတယ်။ဒါကြောင့် မျက်နှာကို လက်နဲ့ ထိတွေ့မှုမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။
နှာချေ၊ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ နှာခေါင်း နဲ့ ပါးစပ်ကို တစ်ရှူးစနဲ့အုပ်ထားပြီး ဆိုးပါ။ ပြီးတာနဲ့ တစ်ရှူးစကို အမှိုက်ပုံးထဲ သေချာစွာ စွန့်ပစ်ပါ။ တစ်ရှူးအလွယ်တကူမရှိတဲ့အခါ တံတောင်ကွေးထဲကို ချေလို့ ရပါတယ်။
အလုပ်ကြောင့် မဖြစ်မနေလူထူတဲ့နေရာကို သွားရမယ် ဒါမှမဟုတ် ရုံးဆင်းရုံးတက်ကို အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို သုံးတဲ့အခါမျိုးမှာ နှာခေါင်းစည်းကို သေချာစွာတပ်ဆင်ရပါမယ်။
အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကြောင့် မိသားစုဝင်တွေကို ရောဂါပိုး ကူးစက်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်
ဘာကိုမှ မထိပါနဲ့ – အိမ်ကိုပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမှာ ဘာကိုမှ မထိမိစေဖို့ သတိထားပါ။ အကြောင်းက လက်အပါအဝင် တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရောဂါပိုးတွေ ကပ်ပါလာနိုင်တာကြောင့်ပါ။ လက်ကို အရင်ဆေးဖို့ လုပ်ပါ။
ဖိနပ်ကို အိမ်အပြင်ဘက်မှာ ချွတ်ပါ – ဖိနပ်က နေရာအနှံ့ကို နင်းထားတာကြောင့် COVID_19 အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ရောဂါတွေ ကပ်ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးက ဖိနပ်ကို အိမ်ခန်းအပြင်ဘက်မှာ ချွတ်ပါ။
အိတ်တွေကို အဝင်ဝမှာ ခဏလောက်ထားပေးပါ – ရုံးသွားတဲ့အခါ ယူဆောင်သွားတဲ့ အိတ်တွေ နဲ့ ထမင်းချိုင့်စတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို အဝင်ဝမှာ ခြင်းတစ်လုံးထားလို့ ခဏ စုထည့်ထားပေးပါ။ ကားသော့၊ ပိုက်ဆံအိတ်ပါမကျန်ပေါ့။ နာရီဝက်လောက် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ပြီးရင်တော့ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးလို အရာနဲ့ ပိုးသတ်ပြီးမှ အထဲကို ယူဖို့လုပ်ပါ။ အရက်ပြန်ကို အသုံးပြုပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
လက်ကိုင်ဖုန်းကို သန့်စင်ပါ – တစ်နေ့တာမှာ ထိတွေ့ထားတဲ့ ဖုန်းကိုလည်း သန့်စင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ လက်ပ်တော့ကိုရောပေါ့။ သန့်စင်ဆေးရည်နဲ့ သေချာလေး သန့်စင်ပေးပါ။ မျက်မှန်ကို သန့်စင်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
လက်ဆေးပါ – အပြင်ကပြန်လာတိုင်း ဘာကိုမှ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဦး။ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေး တွေကိုတောင် မထိတွေ့ပါနဲ့ဦး။ လက်ကို ရေနဲ့ ဆပ်ပြာသုံးလို့ စက္ကန့် ၂၀ ကြာ သေချာလေး ဆေးကြောပါ။
အဝတ်အစား ချက်ချင်းလဲပါ – အဝတ်အစားတွေမှာလည်း ရောဂါပိုးတွေ ကပ်ညှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ရေချိုးပြီး အဝတ်အစားကိုလဲဖို့လည်း ချက်ချင်းဆိုသလို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ချွတ်လိုက်တဲ့ အဝတ်အစားကို ချက်ချင်း ဆပ်ပြာရည်စိမ်လိုက်ပါ။
နှာခေါင်းစည်းတွေ လက်အိတ်တွေကို သေချာစွန့်ပစ်ပါ – အများသုံး သယ်ယူဖို့ဆောင်ရေး စနစ်ကို အသုံးပြုနေရတယ်၊ ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်မှာစိုးလို့ ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ နှာခေါင်းစည်းတပ်တယ်၊ လက်အိတ်တွေ သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထဲကို မဝင်ခင်မှာ အမှိုက်ပုံးထဲကို သေချာလေး စွန့်ပစ်ပါ။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းတွေကို သီးသန့်ခွဲထားပါ
သွားပွတ်တံ၊ တဘက်ကစလို့ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးအတွက် အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သီးခြား ခွဲထားပေးပါ။ အခြားမိသားစုဝင်တွေရဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရောမထားပါနဲ့။
ဒီအချက်တွေအပြင် အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားမယ်၊ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးဂရုစိုက်မယ်၊ သွားလေရာကို ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်ယူသွားလို့ လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်း လက်ကို သန့်စင်မယ်၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်မယ်၊ သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုဗစ်ကို ထိုက်သင့်သလောက် ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
COVID-19 (Coronavirus) Prevention Tips https://www.medicinenet.com/covid-19_prevention_tips/article.htm Accessed Date 19 April 2020
Coronavirus (COVID-19) Prevention: 12 Tips and Strategies https://www.healthline.com/health/coronavirus-prevention Accessed Date 19 April 2020
How to Protect Yourself & Others https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html Accessed Date 19 April 2020
ဘေဘီလေးကို COVID_19 ကနေ ဒီလို ကာကွယ်ပါ
COVID_19 လား……………. အပူရှပ်တာလား………………
ကိုယ်ပူတိုင်း COVID_19 လား………………….
ကိုဗစ် ကာလမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း